Valanaretina any Toamasina :: Niampy iray ny olona matin’ny coronavirus • AoRaha
Valanaretina any Toamasina Niampy iray ny olona matin’ny coronavirus
Nohamafisin’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle tamin’ny fandaharana manokana tamin’ ny onjam-peo sy fahitalavitra, omaly tolakandro, ny fahafatesan’ilay teratany filipiana antsoina hoe Ryan Reyes, mpiasa ao Ambatovy Toamasina. Afak’omaly alina no niely tamin’ny tambajotran-tserasera « Facebook » ny vaovao anatiny navoakan’ io orinasa io momba ny fahafatesana mpiasa noho ny tsimok’aretina « Covid-19 ».
Izy no olona faharoa namoy ny ainy vokatry ny coronavirus teto Madagasikara, tamin’ny alatsinainy 18 mey lasa teo, tao amin’ny toeram-pitsabona ao anatin’ny orinasa Ambatovy ihany. Tamin’ny 11 mey lasa teo ilay mpiasa no voalaza fa nampidirina tao amin’ny toeram-pitsaboana ary nahatiliana ny tsimok’aretina « Covid-19 ». Voalazan’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ity orinasa ity, fa efa nifandray tamin’ny fianakavian’ny maty ny manam-pahefana any an-toerana sy ireo mpitantana ao Ambatovy.
« Nodimandry i Ryan Reyes rehefa notsaboina tany amin’ny hopitalin’Ambatovy. Tsy nanaraka ny fenitra fitsaboana malagasy miaraka amin’ny Covid Organics na CVO izy. Roa izao no maty vokatry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara », hoy ny fanamafisan’ny mpitondra teny avy eny amin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny Covid-19 (CCO) Ivato. Marary efatra vaovao Mikasika ny tranga vaovao, tamin’ireo fitiliana iraika amby enimpolo natao, afak’omaly (efatra amby telopolo tany Atsinanana ary efatra amby roapolo teto Antananarivo) dia nahitana olona efatra voan’ny coronavirus. Ny roa teto Antananarivo raha tany Toamasina kosa ny roa ambiny.
Tafakatra enina amby roapolo sy telonjato ny fitambaran’ireo olona olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 » eto Madagasikara. Tsy misy ny sitrana, omaly, ka fito sy roanjato no manohy manaraka fitsaboana eny amin’ ireo hopitaly samihafa.
Mihatsara kosa ny fahasalaman’ny marary mafy iray eny amin’ny hopitaly Anosiala. Tsy mila ôksizena intsony izy saingy mitohy ny fanaraha-maso sy ny fitsaboana azy, araka ny tatitra nataon’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, omaly.
Taranja mekanika Miandrandra fifaninanana efatra ny Federasionan’ny hazakaza-piarakodia
Valanaretina tany Mahajanga :: Mpiasa namita iraka nitondra tsimok’aretina « Covid-19 »
Fanadinana BEPC sy Bakalorea :: Nanaovana fakan-kevitra ny momba ny adina ara-panatanjahantena